Al-Shabaab oo oday da’ ah ku toogtay Mubaarak
Ururka gabbal-dhaciisa la joogo ee al-Shabaab wuxuu magaalada Mubaarak ee gobalka Shabeellaha Hoose ku toogtay 3 rag ah oo uu ka mid yahay oday da’ ah.
Labo ka mid ah raggaas ayuu ururka ku eedeeyay inay basaasiin u ahaayeen ciidammada amniga ee dowladda Soomaaliyeed halka kan saddexaad uu ku eedeeyay inuu ka qeyb qaatay doorashooyinkii 2017-kii ee aqallada xildhibannada dalka.
Sababta ururku u toogtay odayga ayay dad badan la yaabeen iyadoo qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ay sheegeen in dilkiisa ay u aaneynayaan mucaaradnimada odaygaas ee dhaqammada gurracan ee ururka al-Shabaab iyo in ururku doonayo in odaygaas uu tusaale u ahaado qof allaale qofkii mucaarado al-Shabaab. Odaygaas waxaa lagu yaqaannay cambaareynta falalka iyo hoggaanka al-Shabaab.
Sidoo kale, ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab wuxuu inta badan dadka u dilaa ka dib markii ay diidaan inay bixiyaan canshuurta uu sida sharci-darrada ah uu uga uruuriyo ganacsatada iyo kuwii cambaareeyaan falalkiisa foosha xun.
Inta badan dembiyada uu ururka ku soo oogo dadka waxay ku sal leeyihiin iyadoo dadka dembiyada lagu soo oogay ay diideen inay bixiyaan canshuurta.
Haatan kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab waxaa soo wajaheen weerarro culus oo kaga imaanayaan dhanka Ciidammada Xoogga Dalka iyo kuwa caalamiga ah ee dalka Soomaaliyeed saaxiibbada la ah wuxuuna isu dayayaa inuu aamusiiyo qof allaale qofkii cambaareeyo falalkiisa.